Tanàna tsara indrindra any Torkia honenana - ALinks
Ny sasany amin'ireo tanàna tsara indrindra any Torkia honenana dia Istanbul, Antalya, Bursa, ary Sanliurfa.
Laharana voalohany ho an'ny vondrom-piarahamonina ara-kolontsaina, misokatra ary manasa i Turkey. Ny tanàna Tiorka dia mora mipetraka ao amin'ny sokajy "Miaina". Manana lanitra feno masoandro izy ireo ary lafo vidy. Ny Tiorka sy ny vahiny dia manaiky izany.
Tiorka dia manintona ny vahiny noho ny vidim-piainana tsy lafo sy ny kolontsaina samihafa.
Tanàna tsara indrindra any Torkia hipetrahana
Ireto ny toerana tsara indrindra hipetrahana any Torkia. Jereo raha toa manintona izany.
Istanbul, ny safidy cosmopolitan
Istanbul dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra mipetraka any Torkia ho an'ny olona mitady asa. Io no tanàna tiana indrindra any Torkia, indrindra ho an'ny sehatry ny fandraharahana. Izy io dia maneho ny sehatra manan-tantara, ara-toekarena ary ara-kolontsaina ao amin'ny firenena. Izany no mahatonga azy io ho tsara ho an'ny orinasa.
Manolotra ny zava-drehetra tokony hananan'ny tanàna iray izy io:
Fialam-boly be atao amin'ny alina, fivarotana be dia be, sekoly miavaka eto an-toerana sy any ivelany,
ary, mazava ho azy, ny mahasarika toy ny Hagia Sofia, moske manga, sy ny hafa.
Istanbul dia manana toetrandro mahafinaritra izay tsy mafana amin'ny fahavaratra (matetika ny tampon'isa manodidina ny 24 C). Lasa mangatsiatsiaka anefa izany rehefa ririnina, ary tsy mahazatra ny lanezy.
Antalya, fizahan-tany, fandraharahana ary fiainana amoron-dranomasina
Toerana fizahan-tany malaza i Antalya. Mety tsara ho an'izay liana amin'ny fanokafana trano fisakafoanana na hotely. Mazava ho azy fa midika izany fa ho ara-potoana ny orinasa. Mbola hanome fanantenana mahafinaritra ihany anefa izy io.
Maro amin'ireo mpila ravinahitra no mifindra monina any Antalya sy ireo tanàna amoron-dranomasina hafa ao amin'ny faritra. Rehefa mahazo traikefa amin'ny rendrarendran'ny fiainana any amin'ny morontsirak'i turquoise any Torkia izy ireo.
Madio sy azo antoka ny tanàna, misy tsenan-tsakafo isan-kerinandro izay manampy amin'ny fampihenana ny vidim-piainana. Raha te hiasa ianao dia ny tanàna no safidy tsara indrindra. Noho ny fifandraisana Internet haingana kokoa sy ny rafi-pitateram-bahoaka.
Bursa, maitso kokoa ary tsy dia an-tanàn-dehibe
Satria malaza sy cosmopolitan kokoa ny ilany andrefan'i Torkia, maro ny Eoropeana no tia azy io. Saingy, raha tianao ny tena fahatsapana an'i Torkia, Burse no toerana aleha.
Na izany aza, noho izy io dia metropolisy, misy toerana maitso maromaro. Noho ny toerana voajanahary maro, anisan'izany ny valan-javaboary sy ny ala, izany no fantatra toy ny Green Bursa. Satria tsy dia an-tanàn-dehibe loatra izy io, toerana tsara hipetrahana miaraka amin'ny fianakaviana.
Ny ski dia bonus tsy ampoizina ho hitanao eto, ary tsy fahita any Torkia izany. Ny Tendrombohitra Uludag, izay ahitana toeram-pialan-tsasatra, dia manjaka amin'ny lanitry ny tanàna. Ity angamba no toerana ho anao raha te hipetraka any Tiorkia ianao nefa tsy te hiala amin'ny hetsika ririnina.
Sanliurfa, ivon'ny lova maneran-tany
Sanliurfa, tanàna Byzance any Edessa ary lazaina fa toerana nahaterahan'ny Mpaminany Abrahama. Efa ela izy io no toerana mahaliana any Torkia.
Tonga ny tondra-drano vaovao amin'ny toerana manan-tantaran'i Göbeklitepe. Lasa mora idiran’ny mpizaha tany izany tato anatin’ny taona vitsivitsy. Ireo monoliths Neolithic ireo dia ambara ho Lova Iraisam-pirenena nataon'ny UNESCO tamin'ny taona 2019.
Izmir, tonga lafatra amin'ny fisotroan-dronono
Raha mifindra any Torkia ianao hisotro ronono, dia tsy hahita toerana tsara kokoa noho Izmir ianao. Iray amin'ireo tanàn-dehibe ao Tiorkia izy io, miaraka amin'ireo fitaovana rehetra izay holazaina amin'izany anarana izany.
Izy io koa dia manana fifandraisana tsara amin'ny fitaterana nasionaly sy iraisam-pirenena. Satria seranan-tsambo lehibe izy io Raha tsy te hampiasa ny fiara fitateram-bahoaka ianao, dia manana lalana mandeha an-tongotra ny tanàna.
Ny faritra metropolitan Izmir is located miaraka amin'ny tanàna. Misy vondrom-piarahamonina kely kokoa izay mety kokoa amin'ny fiainana misotro ronono. Soa ihany, mbola mifandray tsara amin'ny tanàna sisa izy ireo.
Fethiye, toerana tsara tarehy misy yacht
Noho ny toerana tsara tarehy eo anoloan'ny seranana, ity tanàna misy mponina 100,000 ity dia malaza be. Iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Tiorkia manamorona ny morontsirak'i Mediterane izy io.
Fethiye dia toerana malaza amin'ny sambo. Noho izany, raha tantsambo ianao amin'ny asa dia afaka mipetraka amin'ity toerana ity.
Ankara, ivon'ny fandraharahana sy ny indostria
Ankara no tanàna faharoa lehibe indrindra ary mipetraka eo afovoan'ny firenena.
Ankara dia ivon-toeram-piasana lehibe sy indostrialy. Saingy misy antony roa mavesa-danja hampidirana azy ao amin'ny dianao Tiorkia.
Ankara no tanàna tsara indrindra hipetrahana ary manana faka lalina amin'ny tantaran'ny turkey ary koa ny indostria izay manome vola anao.
Inona no toerana azo antoka indrindra hipetrahana any Torkia?
Eskisehir, any Torkia, dia iray amin'ireo tanàna azo antoka indrindra eran-tany. Ary iray amin'ireo azo antoka indrindra any Torkia.
Iza no tanàna mora indrindra any Torkia?
Sanliurfa, Kayseri, Mersin, Konya, Iskenderun, ary Hatay no tanàna mora indrindra any Torkia. Manana toerana tsara tarehy sy vidim-piainana ambany ny tanàna. Ny olana fotsiny dia lavitra ny renivohitra izy ireo.
Aiza no misy ny ankamaroan'ny vahiny any Torkia?
Mipetraka any amin'ny toerana samihafa ny vahiny any Torkia. Ny ankamaroany dia manodidina ny morontsirak'i Aegean sy Mediterane. Satria izy io dia mpandala ny nentin-drazana kokoa noho ny tapany andrefana amin'ny firenena, vitsy ny olona monina any atsinanana. Ny mpiasa taloha dia aleony mipetraka any amin'ny tanàna lehibe toa an'i Istanbul sy Ankara.
loharanom-baovao: Turkey iResidence
Ny sarin'ny fonony dia any Antalya, Torkia. Sary avy amin'i engin ayurt on Unsplash